राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा काटिएको घाँटीको सफल शल्यक्रिया - Action Khabar - Nepali Online News Portal
राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा काटिएको घाँटीको सफल शल्यक्रिया
दाङ । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले दुर्घटनामा काटिएको घाँटीको सफल शल्यक्रिया गरेको छ । मोटरसाइकल दुर्घटनामा परि घाँटी काटिएको अबस्थामा प्रतिष्ठान आइपुगेका घोराही ७ सौडियारका २२ बर्षिय भुपेश चौधरीको सफल शल्यक्रिया गरिएको हो ।
कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिम मोल्दै प्रतिष्ठानका चिकित्सकहरुले इमरजेन्सीमा ती युवाको घाँटीको सफल शल्यकृया गरेका प्रतिष्ठानले जनाएको छ । कोरोनाको महामारीमा पनि इमरजेन्सी अस्पतालमा उपचारका लागि आउने बिरामीलाई सम्पूर्ण सुरक्षाका साधन अपनाएर उपचार गरीएको नाक, कान तथा घाँटी रोग विशेषज्ञ डा. बिक्रम बुढाथोकीले बताए।
दुर्घटना भई नालिमा ठोक्किँदा ती युवाको घाँटी काटिएर रक्ताम्य अबस्थामा प्रतिष्ठान ल्याइएको थियो । डा. बुढाथोकीले घाँटी छिया–छिया अबस्थामा भएका ति युवा समयमै अस्पताल नआएको भए ज्यानै ज्यानु जोखिम रहेको बताए । ‘उहाँलाई बेलैमा अस्पताल ल्याउँदा उपचार संभव भयो, नत्र उहाँको ज्यानै जाने जोखिम थियो ।’ उनले भने ।
डा. बुढाथोकीले जटिल खालको अप्रेसन भएको र कोभिडको बेला पनि चिकित्सक खटिएर बिरामीलाई सेवा दिन पाउँदा आफुलाइ सन्तोष लागेको बताए । ती युवालाई कोभीडको बेला जिल्ला बाहिर उपचारका लागि रेफर गर्ने अबस्था समेत नरहेकाले प्रतिष्ठानका चिकित्सकहरुले आपसमा सल्लाह गरेर साबधानीपूर्वक उपचार गरेका थिए ।
बिरामीलाई काठमाडौं लगेर उपचार गरेको भए १ लाख भन्दा बढि खर्च आउँथ्यो । ‘हामीले यहाँको श्रोत साधन र उपकरणबाटै न्युन शुल्कमा अप्रेसन गरेका छौं ।’ डा. बुढाथोकीले भने । अप्रेसनपछि बिरामिको अबस्था सामान्य रहेको छ ।
जटिल प्रकारको घाँटीको शल्यक्रियामा डा. बुढाथोकीको नेतृत्वमा रहेको एनेस्थेसिया डा. अन्जित केसि, अर्थोपेडिक सर्जन ऋषिस्बेर श्रेष्ठसहित ओटि र एनेस्थेसियाका नर्सहरु सिर्जना महरा, सुशिला चौधरी, अनिता वलि, बसन्ता थापा, समिता डिसि चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीहरु संलग्न थिए । तस्विरः राप्ती प्रतिष्ठान
- ४ जेष्ठ २०७८, मंगलवार १८:१७ मा प्रकाशित